Fampahafantarana ny JW.ORG Nandritra ny Foara Momba ny Boky, Toronto
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Basque Catalan Cebuano Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Galicienne Galoà Grika Géorgien Hebreo Holandey Hongroà Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Koreanina Krio Kroaty Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Maya Mingrelian Nahuatl (Huasteca) Ngabere Norvezianina Oromo Ourdou Pendjabi Persianina Poloney Portogey Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tahisianina Tajiki Tankarana Tarasque Tigrigna Tiorka Tojolabal Tongan Totonac Tseky Tzotzil Télougou Umbundu Valencienne Vezo Xhosa Zapoteky (Andilan-tany) Zoloa tzeltal
Nisy Foara Iraisam-pirenena Momba ny Boky natao tao amin’ny trano iray fanaovana fihaonam-be any Toronto (Metro Toronto Convention Centre), tamin’ny 13 ka hatramin’ny 16 Novambra 2014. Nisy boky vita pirinty sy amin’ny endrika elektronika naseho tao. Naharitra efatra andro ilay foara, ary olona 20 000 mahery no tonga.
Nanana toerana fampirantiana tao amin’ilay foara ny Vavolombelon’i Jehovah ary natao mareva-doko izy io. Nasiana tablettes maromaro tao, mba hampisehoana amin’ny olona ny fomba fampiasana ny jw.org.
Hoy ny tompon’andraikitra iray tao amin’ilay foara: “Tena maoderina be ilay tranonkalanareo. Tokony hianatra ny fomba anaovanareo an’ilay izy koa ny mpanao fampirantiana hafa.” Nilaza ny olona sasany nitsidika an’ilay toerana fampirantiana fa tena mahay izay namorona an’ilay tranonkala, mora ampiasaina ilay izy, ary mamaly fanontaniana manahiran-tsaina. Gaga koa izy ireo satria manampy ny olona hiatrika olana ilay tranonkala.
Niresadresaka tamin’ny mpitsidika ireo Vavolombelona nanao fampirantiana, ka nahita hoe tsy mbola nandre momba ny jw.org mihitsy ny ankamaroany. Saika izy rehetra no nanaiky handray an’ilay karatra jw.org, na ilay taratasy mivalona hoe Iza no Mahavaly ny Fanontaniana Momba ny Fiainana? Maro no nilaza fa hijery an’ilay tranonkala indray. Nisy aza nangataka ny hotsidihin’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Natao “Andron’ny Ankizy” ny andro zoma tamin’ilay foara, ary nisy Vavolombelona nampiseho kisarisary avy tao amin’ny jw.org. Nisy ankizy maromaro niaraka tamin’ny mpampianatra azy nijery an’ilay izy.
Anisan’ny naranty tao koa Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao. Faly be ny lehilahy iray avy any Chicago nahita ny hatsaran’ilay Baiboly. Mpiasan’ny orinasa iray mpanao pirinty Baiboly izy io. Nomena karatra jw.org izy, satria te hifandray amin’ny olona nanao pirinty Ny Soratra Masina—Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao.
Misy amin’ny fiteny 700 mahery ny tranonkalan’ny Vavolombelon’i Jehovah. Nijery ny 16 tamin’ireo ny mpitsidika ka ireto avy izany fiteny izany: Amharique, anglisy, bengali, espaniola, frantsay, goujrati, grika, hindi, koreanina, ourdou, portogey, sinoa, soedoà, tamoul, tigrigna, ary vietnamianina.
Tsapan’ny Vavolombelona iray nandray an’ireo mpitsidika fa tsy mitovy mihitsy ny hoe miresaka amin’ny olona momba an’ilay tranonkala sy ny mampiseho an’ilay izy amin’izy ireo. Hoy izy: “Faly erỳ izahay afaka nampiseho an’ilay tranonkala tamin’ny olona.”
Atoro ato ny fanovana ny fiteny ato amin’ity tranonkala ity sy ny fitadiavana boky sy gazety ary rakitra amin’ny fiteny hafa.